लिप सेकेण्ड भनेको के हो ? ~ विज्ञान संसार
लिप सेकेण्ड भनेको के हो ?
Posted by Om Bhandari On 5:38 AM
समन्वित विश्व समयका आधारमा निर्धारण गरिएको समयलाई बेलाबेलामा सौर्य समयसँग मिलान गर्न आवश्यक हुन्छ । यसरी मिलान गरिने सेकेण्ड नै लिप सेकेण्ड हो । पोजेटिभ लिप सेकेण्ड भएको खण्डमा १ सेकेण्ड थपिन्छ भने नेगेटिभ भएको खण्डमा १ सेकेण्ड घटाइन्छ ।
इन्टरनेशनल अर्थ रोटेशन एण्ड रेफरेन्स सिस्टम सर्भिसले लिप सेकेण्डको घोषणा गर्छ । सामान्यतया प्रत्यक १८ महिनामा लिप सेकेण्डको समायोजन गरिन्छ । तर पृथ्वीको गतिको कारण यति नै पटक लिप सेकेण्ड थपिन्छ वा घटाइन्छ भन्ने हुदँन ।
सन १९७२ जुनदेखि जनावरी १ सम्म २३ पटक लिप समायोजनका लागि निर्देश गरिएको थियो तर सन १९९१ बाट सन २००५ डिसेम्बरसम्म १ पटक पनि समायोजन गर्न निर्देशन दिइएको थिएन ।
Categories: लिप सेकेण्ड, समय
आणविक हिउँद भनेको के हो ?